Mitoraka Bilaogy Avy any Togo – Fijery An’ireo Hetsi-panoherana Aorian’ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Oktobra 2017 5:23 GMT
Lasa sarotra be ny toe-draharaha taorian'ny fifidianana any Togo. Nilaza i Faure Gnassingbé, ilay zanaky ny mpitondra Togoley efa maty, Gnassingbé Eyadema, fa nandresy tamin'ny 60%-n'ny vato nisaina tamin'ny fifidianana ny Alahady 24 Aprily 2005. Saingy miparitaka be ny fiampangàna fisiana hosoka tamin'ny fifidianana, ary namaly ny fahalani'n'i Gnassingbé taminà hetsi-panoherana mahery vaika ireo mpanohana ny mpanohitra. Ankehitriny, L'Intelligent d'Abidjan (gazety an-tsoratra tsy miankina izay mandefa vaovao amin'ny Aterineto amin'ny alalan'ny bilaogy) mitatitra fa nisora-tena ho filoha ny kandidàn'ny mpanohitra, Akitani Bob:
“Ry Togoley, miteny aminareo ny filohanareo, eny ny filohanareo, satria tsy resy tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena isika. Ilay fifidianana ho filoha natao tamin'ny 34 Aprily 2005. Tokony ho fantatrareo izany mba hitoeranareo ho vonombonona”, hoy Atoa. Akitani Bob nanoloana ny mpanao gazety tao Lomé.
(Ny fandikàna ratsiko – “Ry mpiray tanindrazana amiko, miresaka aminareo ny filohanareo, eny ny filohanareo, satria tsy resy tamin'ireo fifidianana filoham-pirenena isika. Ilay fifidianana filoha ny 24 aprily 2005. Tokony hahalala izany ianareo mba ho vonona ny hihetsika”, hoy Atoa. Akitani Bob manoloana ireo mpanao gazety tany Lomé.)
Tao anatin'ireo mpitoraka bilaogy manerana ny tany maneho hevitra momba ilay toe-draharaha, tena tsara vakiana manokana ireo Tenin'ito Yovo ito. (Yovo” midika “vahiny” amin'ny teny Ewe, ampiasaina be ao Togo atsimo sy atsinanan'i Ganà.) I Jürgen Henn moa ilay yovo resahana eto, Alemà izay tonga tao amin'ny tanàna kelin'i Yipka, Togo, tamin'ny faran'ny dia lavitra tamin'ny bisikileta izay nanomboka tao Alemaina ary naratra tao Maraoka, Alzeria ary Nizera. Nanajanona ny bisikiletany tany Yipka moa i Jürgen ary niverina tany herintaona taty aoriana, gaga nahita fa tsy nisy nihetsika io sy ny ambin'ny fanànany. Variana tamin'izany ka nanapaka hevitra ny hijanona tao amin'ilay tanàna kely – teo amin'ny roa taona teo – ary lasa mpamily fiarakaretsaka any ambanivohitra. Nahatonga azy afaka naneho hevitra amin'ilay toe-javatra any Togo, izay tsy mahasintona fijerin'ny media lehibe, ny zavatra fiainana Togoley niainany:
ialàn'ny gazety am-pahamalinana foana ny lafiny iray tena lehibe amin'ny korontana ao Togo : ny haben'ny foko. Kabyé ny ankamaroan'ireo mpitandro filaminana, fa amin'ny ankapoben'ny ambanivohitra ivelan'i Kara, misitrisitrika kely ihany ny fiainan'ny Kabyé. Ara-tantara, mpamboly sy mpanao ampahany izy ireo; niaina sy niasa tamin'ny tanin'olon-kafa. Matetika izy ireo no atao toy ny tsinontsinona, indraindray anaovan'ireo olona manodidina azy herisetra. Tamin'ny fotoanan'i Eyadema, nampidirina tao amin'ny hery miaramila sy polisy izy ireo. Ny sasany lasa tànan-kavanan'ny fitondrana. Ankehitriny izy ireo matahotra hoe hisy hamono na hanao herisetra raha tsy tafajanona eo amin'ny fahefany intsony ny RPT, noho izany, vonona sy mahavita ny zavatra rehetra izy ireo mba hitazonana ny RPT eo amin'ny fitondrana.
Nanampy ireo namany any Yipka i Jürgen mba hanangana bilaogy – manana bilaogy iraisana izy ireo ankehitriny, Au Village. Agbessi, manoratra ao amin'ny Au Village, manana tatitra amin'ny teny Anglisy mikasika ny famonoana miaramila iray nanara-maso ireo fifidianana tany Adeta. Lahatsoratra tao amin'ny bilaogy vao haingana kokoa – fitadidiany ireo niainany tamin'ny naha mpanao hetsi-panoherana azy tao amin'ny Anjerimanontolo Nasionaly, tratran'ny entona mandatsa-dranomaso sy nodarohan'ireo miaramila Togoley – dia mahery, mahatorotoro fo ary zava-dehibe ho an'ireo izay miezaka hahatakatra ny hatezeran'ny mpanohitra Togoley:
Lorsque vous avez vecu des pietinements et bastonnades de soldats et supporter la une dictature qui existait avant votre naissance et que vous avez supporte pendant plus de 26 ans de votre vie, vous regardez autrement et avec revolte ce qui se passe actuellement au Togo.
(Nadikan'ny vadiko indray tamin'ity, izay miteny io fiteny io ankehitriny – “Raha niaina tao anatin'ny hitsakitsaka sy darok'ireo miaramila ianao, niaritra fitondrana jadona izay efa nisy hatramin'ny talohan'ny nahaterahanao ary niaretanao nandritra ny 26 taona mahery tamin'ny fiainanao, hijery amin'ny fomba fijery hafa mihitsy ianao, arahan'ny fitroarana amin'ny zavatra mitranga ankehitriny ao Togo.”)
Raha misy mahay miteny Frantsay sy Anglisy tsara ary liana amin'ny fandikàna ireo lahatsoratra avy ao amin'ny bilaogy, tena feno fankasitrahana tokoa aho ary handefa azy ireo ao amin'ny Global Voices ho an'ireo rehetra liana amin'ny toe-draharaha ao Togo – miangavy anareo hiresaka amiko ao amin'ny ethanzATgmailDOTcom na mandefa fandikàna ao amin'ny sehatr'ireo fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity.